Baarlamanka Puntland oo la filayo in ay war cad ka soo saaraan Kusimaha madaxweynaha – Puntland Post
Posted on February 24, 2020 February 24, 2020 by CCC
Golaha Wakiilada dowladda Puntland, ayaa la filayaa in ay war cad ka soo saaraan muran ka aloosan, cidda noqoneysa ku-simaha madaxweynaha Puntland, marka isaga iyo madaxweyne ku xigeenkiisu ay dalka ka wada-maqan yihiin.
Golayaasha Baarlamaanka iyo Xukuumadd, ayaa ku muransan cidda noqonaysa ku-simaha madaxweynaha, marka ay maqan yihiin madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa. Golaha Wakiilada ayaa ku doodaya in haddii labadaasi mas’uul maqan yihiin ay awooddu u laabanayso Guddoonka Baarlamanka.
Sidoo kale , Golaha Xukuumadda ayaa ku doodaya in haddii labadaasi maqan yihiin uu sii hayaha madaxweynaha noqonayo Wasiirka Caddaaladda, islamarkaana aysan wax door ah ku yeelan Karin Golaha Baarlamanka..
Muranka ayaa xoogaystay kadib markii Shalay Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Wakiilada Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame uu madaxweyne Deni ku eedeeyay, in uu ku ciyaaray Hab-maamuuskii dowladnimo, kadib markii uu kusime ka dhigtay wasiirkiisa Caddaaladda.
Balse, madaxweyne Deni ayaa la filayaa in uu isla maanta dib ugu soo laabto Puntland kadib safar uu mudda todobaad ah ku joogay dalka Jabuuti, halkaas oo sida la sheegay uu casumaad rasmiya ka helay madaxweynaha Jabuuti.